Xadgudubyada aan cidna loo ciqaabin ee laga galo Suxufiyiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya waxay gashaa sanad walba meelaha tacadiga ugu badan ee aan cidna loo qaban loogu gaysto suxufiyiinta, oo kala kulma dhinacyada isku haya dalka dilal iyo xarig joogto ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda AFEX ee fadhigeedu yahay Canada ayaa soo saartey warbixin ay ku sheegtay inuu sii kordhayo dhaqanka cidna aan lagula xisaabtamin xad-gudubka loo geystay Suxufiyiinta, iyagoo soo tabinaya warar iyo macluumaad ay u gudbinayaan bulshada.
AFEX oo u doodda xuquuqda wariyeyaasha, ayaa shaacisay in sanadkii 5aad ay Soomaaliya safka hore uga jirto dalalka ay ka dhacaan xad gudubyada ugu badan ee ka dhanka ah saxaafadda iyo suxufiyiinta, iyadoo la dilay saddexdii sano ee lasoo dhaafay illaa 8 wariye.
Mas'uuliyiinta dowladda Soomaalida marar dhif ah ayey baaraan kiisaska dilka ama weerarada loo geysto suxafiyiinta, xarumaha warbaahinta iyo dadka dhaliila maamullada ka jira wadanka iyo Kooxda Al-Shabaab.
Sanadkii tagey ayaa ahaa midka ugu xumaa, oo ay dhaceen dilalka, xariga wariyeyaasha iyo xaruumaha warbaahinta, iyadoo dhacdooyinka laga diiwaangeliyay Muqdisho, Puntland iyo Somaliland, oo maamullada ka jira isku daya inay aamusiyaan warbaahinta madaxa-banaan.
Intaas waxaa sii dheer, sanadka 2019 oo kaliya, 12 suxufi ayaa lagu qasbay in ay dalka ka cararaan, iyaga oo ka baqaya xarig ama dil qorsheysan, oo uga yimaada Al-Shabaab ama dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada.
Xorriyadda hadalka iyo madax-banaanida saxaafadda ayaa sii xumaanaysay tan iyo markii Farmaajo madaxweyne ka noqday Soomaaliya, iyadoo uu kordhay adeegsiga Ciidamada qaranka, gaar ahaan NISA ee dilalka, hanjabaadda iyo jirdilka wariyeyaasha.
Tan iyo sannadkii 1992-kii, oo ku beegneyd hal sano ka dib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ilaa 69 suxufi ayaa lagu dilay Soomaaliya, mana jirin dad si rasmi ah loogula xisaabtamay iney dilalkaas ka dambeeyeen.
Warbixinta AFEX ayaa kusoo aadaysa xili bil kadib Soomaaliya ay doorasho ka dhacayso, islamarkaana uu jiro walaac xoog leh oo ku aadan la faaf-reeb lagu sameeyo saxaafadda xorta ah ama loo diido inay tagaan gaabaha codbixinta ka dhacayso.
0 Comments Topics: farmaajo nisa saxaafadda wariye abuuja